RASMI: Chelsea oo xaqiijisay in labo ka mid ah xiddigaheeda laga helay Korona Fayras – Gool FM
RASMI: Chelsea oo xaqiijisay in labo ka mid ah xiddigaheeda laga helay Korona Fayras
Ahmed Nur January 6, 2022
(London) 06 Jan 2022. Xanuunka Korona Fayras ayaa si xoog leh ugu soo rogaal celiyay dalka Ingiriiska, waxaana haatan naadiga Chelsea ay xaqiijisay in xanuunkaan laga helay xiddigaheeda kala ah Thiago Silva oo daafaca dhexe iyo xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee N’Golo Kante.
Kooxda heysata horyaalnimada qaaradda Yurub ayaa si ba’an ula tacaaleysa xanuunkan waxaana xiddigaha laga helay caabuqan tan iyo bilawgii December ay gaarayaan illaa lix xiddig, waxaana ugu dambeeyay Kante iyo Silva.
Labadan laacib ayaa seegi doona kulanka toddobaadka soo aaddan ee FA Cup ay kula balansan tahay naadiga Morecambe iyagoo sidoo kale seegay kulankii ay xalay Blues ka taqallustay naadiga Tottenham Hotspur.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa xalay 2-0 ku garaacday Spurs kulankii lugta hore ee wareegga afar-dhammaadka tartanka Carabao Cup, waxayna lugta labaad booqan doontaa dhiggeeda Asbuuca dambe.
Real Madrid oo ka soo adkaatay kooxda Alcoyano oo ay booqatay kulan ka tirsanaa wareegga 32-aad ee Copa del Rey… +SAWIRRO
Manchester United oo diiwaanka xiddigaha ay dooneyso ku darsatay saddex xiddig oo ka ciyaara khadka dhexe